July Dream: Stop Dengue. Act Now!
မိဘတွေရော.. ပြည်သူလူထုရော.. သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေရော အားလုံး ၀ိုင်းဝန်း ကြရင်ဖြင့် ၀မ်းနည်းစရာတွ နည်းလာကောင်းပါရဲ့
ပြီးတော့ သိတတ်စ ကလေးငယ်တွေ နဲ့ လူငယ်တွေ ကလဲ ခြင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိတွေ ရှိနေဖို့ လိုအပ်တယ်
တနှစ်ကသွေးလွန်တုပ်ကွေး outbreak ကတော့ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ တကယ်ပါပဲ ပန်းကလေးတွေကြွေခဲ့တာနည်းတာမှ မဟုတ်တာ။
ဗဟုသုတရစရာလေးတွေ ဖော်ပြပေးလို့ 
ခြင်အန္တရာယ် ဆိုတာကလည်း
ကြိုတင် မကာကွယ်ရင် လည်း
အီးမေးလ်မှာ ပုံတွေတွေ့ကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေတာ...
တပ်အားသမျှ လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကို တလေးတစားနဲ့ အားပေးပါတယ်...
အမေရိက က ခြင်ကိုက်ရင်လည်း မသက်သာပါဘူး...
အခုအချိန် နွေရာသီမှာဆို အပြင်ထွက်ရင် ကိုက်ခံရတတ်
ပါတယ်...ကိုက်ခံရရင်တော့ ဗမာပြည်မှာ ရိုးရိုးခြင်
( သွေးလွန်တုပ်ကွေးခြင်မဟုတ် ) ကိုက်တာမျိုးနဲ့ လုံးဝ
မတူပါဘူး...တအားကို နီရဲ ရောင်ကိုင်းပြီး အလယ်မှာ
အပေါက်သေးသေးလေး တခုရှိနေပါတယ် ...
နှစ်တိုင်းနွေရာသီဆိုရင် ခြင်ကိုက်ခံရလို့ ဆရာဝန်ဆီသွား
ပြရပါတယ် ...ပြီးခဲ့တဲ့ လ ကဘဲ ဆရာဝန်က အမောက်ဆလင်လို ပိုးသတ်ဆေး သောက်ရမယ်ဆိုလို့
ဆေးစာရွက်နဲ့ ဆေးထုတ်ပြီး တိုက်လိုက်တော့မှ အရောင်မြန်မြန် ကျသွားပါတယ်
ပထမတော့ ဆရာဝန်ပေးထားတဲ့ လိမ်းဆေးတမျိုးတည်း
လိမ်းပေးဘူးပါတယ်...ဒါပေမယ့် နီရဲရောင်ကိုင်းနေတာက သိသိသာသာ မသက်သာပါဘူး...ခလေးက ယားလို့ ကုတ်တော့ ပိုဆိုး
ပါတယ် ရောင်နေတဲ့နေရာမှာ ကုတ်လို့ အနာထပ်ဖြစ်စေ
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကလည်း တခါထပ်ကိုက် ခံရပါတယ်
ဒီတခါတော့ ကျမသူ့ကို ပိုးသတ်ဆေး ခဏခဏ ထပ်မတိုက်ချင်တာနဲ့ စိတ်ကူးတခုပေါ်လာပါတယ်..
အဲဒါကတော့ ကျမတို့ ဗမာပြည်က ဒေ၀ယက္ခလိမ်းဆေး
လုံးကလေးကို ကျောက်ပြင်မှာသွေးပြီး ခြင်ကိုက်ခံရတဲ့
နေရာမှာ လိမ်းပေးလိုက်တာ ပိုးသတ်ဆေး သောက်စရာ မလိုတော့ဘဲ ရောင်နေတာ မြန်မြန်ကျသွားပါတယ်...၄ ၅ ခါထက် ပို မလိမ်းရပါဘူး
သက်သာသွားပါတယ်...ကျမ အဲဒါလေး စမ်းလိမ်းကြည့်တာ အဆင်ပြေသွားလို့ အရမ်းကိုဝမ်းသာမိပါတယ်...ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်...ဒါကတော့ ခြင်ရိုးရိုးကိုက်ခံရတာမျိုးပါ...သွေးလွန်တုပ်ကွေးခြင်မျိုးကိုက်ခံရတာမျိုး ဆိုရင် ကျမလည်း ဆရာဝန် မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး...
ဒီမှာက နွေရာသီကျမှ ခလေးအများစု ( လူကြီးတွေလည်း ကိုက်ခံရတတ်ပါတယ် ) အပြင်ထွက်ရင်ပေါ့ ကိုက်ကိုကိုက်ခံရတတ်တာ များပါတယ်...
ကျမဗမာဆေးအားလုံးကို မယုံကြည်ပါဘူး..ဟိုးတလောကဆို ခလေးတွေအတွက် ထုတ်တဲ့ ဗမာဆေးတချို့မှာ အန္တရယ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေ ပါနေတယ်လို့တောင် အစိုးရက တရားဝင်သတင်းထုတ်
ခဲ့ရသေးတယ်မို့လား...ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာဝန်ဆီဘဲ သွားပြနေကြပါ...အခုကတော့ သောက်ဆေးမဟုတ်ဘဲ
လိမ်းဆေးဆိုတော့ စမ်းသုံးကြည့်တာပါ...တခြားဘယ်ဗမာသောက်ဆေးတွေကိုမှ ကျမခလေးအတွက် မသုံးပါ...
မောင်ဇူလိုင်ရေ...အမ ဒီမှာတွေ့ကြုံရတာလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်...ဒီကသူငယ်ချင်းခလေးတော်တော်များများလည်း ခြင်ကိုက်ခံကြရပါတယ်...ဗမာပြည်မှာတုန်းက အမတို့ ခြင်ကိုက်ခံရတာမျိုးနဲ့တော့ လုံးဝမတူပါ...( သွေးလွန်တုပ်ကွေးခြင်မျိုးတော့ မဟုတ်ပါ )
အပေါ်မှာ တခု ကျမရေးဖို့ ကျန်သွားလို့ပါ..
ကျမခလေးက ခြင်ကိုက်ခံရပေမယ့် ကိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာကလွဲလို့ တခြား ကိုယ်ပူတက် ဖျားနာ
တာမျိုးတော့ လုံးဝ မရှိခဲ့ပါ...ကိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာ တအားတင်းပြီး နီရဲရောင်ကိုင်းနေတာ တခုတည်းဖြစ်တာပါ...
အစ်မတို့ ခြင်က အတော်ကြီးပုံပဲနော်။ အနာရဲ့ အလည်မှာ အပေါက်သေးသေး တစ်ခုတောင် ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ သွေးစုတ်တဲ့ နှာမောင်းပဲ ကြီးလို့လား။ ရန်ကုန်မှာဆို မိုးချုပ်မှ ထွက်တဲ့ ခြင်ကြားကြီးတွေတော့ ရှိတယ်။ အကောင်ကြီးကြီးပဲ။ ဖမ်းရတာ အရမ်းလွယ်တယ်။ အဲဒီလို အကောင်တွေနဲ့ တူမလားတော့ မသိဘူးနော်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးခြင်ကျတော့ ရှောင်လင်ကျောင်းဆင်း မော်ဒယ်လ်ဂဲလ်ခြင်များလား မှတ်ရတယ်။ လျှင်တာမှ လစ်ကနဲ လစ်ကနဲပဲ။ အကောင်ကလည်း သေးသေးလေး။ သူ့ကို ရိုက်ချင်ရင်တောင် အသက်အောင့်ပဲ စောင့်နေရှာတယ်။ နည်းနည်းလေး လှုပ်လိုက်တာနဲ့ ထွက်ပြေးသွားတတ်လို့။ ဒီကောင်က အကောင်သာ သေးတာဗျ။ အဆိပ်ကတော့ ပြင်းတယ်။ အဲဒီခြင်တွေ အနံ့ခံလည်း ကောင်းမလား မသိဘူး။ လူရှိပြီဆိုတာနဲ့ ရောက်လာတတ်တယ်။
လောလောဆယ် အဲဒီ ခြင်တွေကို နိုင်သလောက် ရှင်းဖို့ပဲ လုပ်နေကြပါတယ်။ ကလေးတွေ ကလေးဆေးရုံမှာ အများကြီး တွေ့ရတာ စိတ်မသက်သာလို့ပါ။
မျက်လုံးလေး ပိတ်ပြီး စဉ်းစားနေတယ်။ အဖြေရရင်ပြောမယ်။
မျက်မှန်လေးတွေ ဝေရင် ကောင်းမလားပဲ။
ပေါက်ကရ အတွေးလည်း ပေါက်မသွားနဲ့ အုန်း။
ဒီပို့ ထဲက ချစ်သူလေး အကြောင်းမပါပါလား။
ဥပမာ ချစ်သူလေးက လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်တို့ ဘာတို့ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် စွဲထဲ့ရောပေါ့။ ဟဲဟဲ စတာနော်။
ဒေါသကြီးကြီး င်္ခြသေ့ကြီးကို ကြောက်ပါတယ်။
အဓိက ကတော့ ဒီပြဿနာကို စီးရီးရက်စ် အနေနဲ့လူတိုင်း လူတိုင်း (အထူးသဖြင့် ရွာကလူတွေ) နားလည်အောင် ရှင်းပြပြီတော့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် တွေကို ထိထိရောက်ရောက် လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရင် လျော့နည်းလာမယ်လို့မြင်မိတယ်။
ဒီနှစ် နွေမှာ ခြင် အများကြီး ပေါက်နိုင်ပြီး ငှက်ဖျားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး အပူပိုင်းဒေသ ရောဂါများ ကျောင်းက သုတေသနလုပ်တယ်။
လူတယောက်ကို ခြင် ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကိုက်ခံရကိန်းရှိသလဲဆိုပြီး စမ်းသပ် ခြင်ကိုက်ခံတဲ့သူတွေနဲ့ ပေါ့။
လူတယောက်ဟာ တနေ့ မှာ အကြိမ် ၂၀၀ နဲ့ အထက် ကိုက်ခံရကိန်းရှိတယ်ဆိုပြီး အဖြေထွက်လာတယ်။
ဘယ်နှစ်နာရီ အတွင်းလည်းတော့ မမှတ်မိပါဘူး။
ဒါနဲ့ ခြင်ကိုက်တာက အသားထဲ နက်နက် ထိုးကိုက်တာမို့ မေးခိုင်ပိုးဝင်နိုင်တယ်တဲ့။
နွေရာသီ ခြင်များတဲ့ ဒေသ ခရီးထွက်ရင် မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးရမယ်တဲ့။
မအယ်ကတော့ ခြင်ကိုက်ပြီး မေးခိုင်ပိုးအကြောင်း ပြောလာလို့ ဘာ့ကြောင့်မှန်းမသိ ရီလိုက်ရတာဆိုတာ ပြောမနေပါနဲ့ တော့။
မမီးငယ် ပြောသလိုပဲ ခြင်ကိုက်လို့ ယားတာကနေ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ပြီး အဲ့ဒီပိုးက ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်နိုင်တယ် ဆိုပြီးလည်း ခြင်ကိုက်လို့ ယားတာကိုလည်း အနာလေး ဂွမ်းနဲ့ တို့ ပိုးမွေးကြည့်ကြတယ်။
ပိုးတွေ့ ရင် ပိုးသတ်ဆေး ပေးကြနဲ့။
ဖတ်ဖူးတဲ့ ၀တ္တုတိုလေး သတိရသွားတယ်။ ခြင်ကြောင့် fbi တွေ cia တွေ ရောက်လာတဲ့ အကြောင်းပါ။
ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ၀င်ပွားကြည့်တာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ရပ်ရွာထဲမှာ ဆောင်ရန်လည်း သိပါတယ်။ ရှောင်ရန်လည်း သိပါတယ်။ ဒါတွေကို သိခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ ချီခဲ့ပါပြီ။ ဖုန်းသွန်လဲစစ် ဆိုတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်း အိမ်တိုင်း လိုက်မလုပ်ကြပါဘူး။ ထိမှ နာကြပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်မှာ အေးဆေးပါပဲ။
ကိုယ့်အိမ်ရှေ့က မြောင်း ကိုယ်တိုင်ဖော်လည်း အချိန်တန်တော့ မြောင်းဘောင်ပေါ် တင်ထားတဲ့ မြေကြီးတွေ မြောင်းထဲ ပြန်ဝင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ခြင်ဆေးမှုတ်ဖို့ ပိုက်ဆံလိုပါတယ်။ ဆေးဖိုးနဲ့ ဒီဇယ်ဖိုး ၂ သောင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးက အခမဲ့ အလကား မှုတ်ပေးတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြိမ် နည်းပါတယ်။
မသိလို့ မေးဦးမယ်... ဒီလို မီးခိုးမှုတ်ရုံနဲ့ ခြင်တွေ သေရောလား၊ ကျနော့် အထင်ပေါ့ဗျာ... မီးခိုးရှိချိန်မှာပဲ ဒီကောင်တွေ ပျောက်သွားမှာ နောက်နေ့ ပြန်ရောက်နေမှာပဲလို့ ထင်တာပဲ၊ တခြားနည်းဖြစ်တွေကတော့ သက်ရောက်မှု ရှိမှာပါ။ အဟီး ဆရာလုပ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး ထင်တာပြောတာပါ...။
ပန်းခြွေတဲ့လေနဲ့ ပန်းပျိုးတဲ့လက်... ။ ရနိုင်သမျှ နီးစပ်ရာ ၀န်းကျင်တိုင်းအတွက် တတ်နိုင်သမျှ လင်းချင်းလှပရအောင် ဒီပို့စ်လေးကနေ သင်ယူမိသလို၊ ဘယ်အရာကိုမှ လျှော့မတွက်ဖို့လဲ သတိထားမိသွားပါတယ်။ ခြင်ကို လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ ဖြောင်းခနဲမြည်အောင် ရိုက်မသတ်ဖြစ်တာ ကြာပြီ။ ဒီည အပြင်ထွက် ရိုက်သတ်ဦးမှ။